MaBrits anofunga masks ekumeso anofanirwa kuramba achipfekwa mundege
musha » Dzazvino Nhau Zvinyorwa » Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose » MaBrits anofunga masks ekumeso anofanirwa kuramba achipfekwa mundege
Kuputsa Nhau dzeEurope • Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose • Kuputsa Kufamba Nhau • misangano • nhau • vanhu • ushanyi • Kufamba Wire Nhau • UK Kuputsa Nhau
Kunyangwe kurerutswa kwezvirambidzo, vanhu vazhinji vachiri kunzwa kuti zvakanaka uye zvakakodzera kupfeka mask kumeso pandege, zvinoenderana nemutemo wendege zhinji.
Vatatu muvana vevanhu vakuru veku UK vanofunga kuti maski kumeso anofanirwa kuramba achipfekwa nevatyairi mundege, sekutsvagurudza kwakaburitswa nhasi (Muvhuro 1 Mbudzi) neWTM London.
Pane chibvumirano chakakura mumapoka ese emazera, asi ndevanopfuura makumi matanhatu neshanu vanoda kuona mutemo uchichengetwa, inoratidza WTM Indasitiri Report, yakaburitswa kuWTM London, chiitiko chinotungamira chepasi rose cheindasitiri yekufambisa, inoitika pane inotevera. mazuva matatu (Muvhuro 65 - Chitatu 1 Mbudzi) paExCeL - London.
Pawakabvunzwa: Unonzwa here masks ekumeso anofanirwa kupfekwa mundege? 73% vakapindura kuti hongu - yakakwirira kwazvo kupfuura iyo 14% vasina kubvumirana. Vakasara 13% vakati vakanga vasina chokwadi.
Boka rinopfuura-65s ndiro chikamu chevanhu vanonyanya kufarira, ne82% vachiti masiki anofanirwa kupfekwa mundege, inoratidza vhoti yevatengi veUK zviuru.
Avo vari mumapoka ezera re25-64 vanenge vakapatsanurwa zvakaenzana muchibvumirano chavo, ne73% ye55-64s; 74% ye45-54s; 73% ye35-44s uye 72% ye25-34s vachiti vafambi vanofanirwa kupfeka masiki.
Pakati pezvizvarwa zvidiki, 62% ye18-21s uye 60% ye22-24s vanotenda kuti ndege dzinofanira kuramba dzichiita kuti kupfekedzwa kwemask kumeso kuve kwekumanikidza.
Mitemo yekupfeka masiki kumeso yakachinja muEngland musi wa19 Chikunguru, pakazorerutswa.
Kubva 19 Chikunguru, zvanga zvisisave zviri pamutemo zvinodikanwa kupfeka mask kumeso mukati muEngland, kunyangwe Boris Johnson akakurudzira veruzhinji kuti varambe vakavhara zviso zvavo mu 'nzvimbo dzakazara vanhu uye dzakapoteredzwa'. Mitemo yakaomesesa kumeso-masiki inoshanda muWales neScotland.
Ndege zhinji, dzinosanganisira Ryanair, easyJet, TUI neJet2 dzinoshandisa mutemo wemasiki kumeso kune vese vafambi vane makore matanhatu zvichikwira, pamwe nevashandi vepacabin, kunze kwekunge vasunungurwa.
Mukuru weWTM London Exhibition Director Simon Press akati: "Zviripachena, kunyangwe kudzoreredzwa kwezvirambidzo, vanhu vazhinji vachiri kunzwa kuti zvakanaka uye zvakakodzera kupfeka mask kumeso mundege, zvinoenderana nemutemo wendege zhinji."